Burcad Gashay Suuqa Sunrise ee Islii + Toogasho… |
Burcad Gashay Suuqa Sunrise ee Islii + Toogasho…
Suuqa ganacsiga Sunrise Shopping Mall oo ka mid ah Xarumaha Ganacsi ee ku yaallo jidka sagaalaad ee xaafada Eastleigh (Islii) ee Nairobi, ayaa wali xiran kadib markii xalay ay galeen koox tuugo ah oo looga shakiyay iney horay oga shaqeyn jireen suuqaas, iyadoona la toogtay mid ka mid ah kooxahaasi.
Marwo Jawaahir Mohamed oo ah Wakiilka Golaha Deegaanka ee Galbeedka Xaafada Islii, ayaa sheegtay in ilaalada suuqaas ay ku war galiyeen xalay saqdii dhexe in koox burcad ah ay gudaha ugu jiraan suuqaas. Waxeyna intaas ku dartay in ciidamada amaanku ay goobtaas gareen abaaro 2-dii xalay.
Suuqa Sunrise oo ka kooban goobo ganacsi oo ay ka mid yihiin Dukaamo fara badan oo ay leeyihiin Ganacsato Soomaaliyeed oo lagu iibiyo Dharka iyo Kabaha, ayaa sidoo kale waxaa ku yaallo Laanta Bangiga Chase Bank ee xaafada Islii iyo waliba Xarunta Waxbarashada Compit oo arday badan ay wax ka bartaan.
Si kastaba ha ahaatee Xaafada Islii oo dad badan oo Soomaaliyeed ay dagan yihiin, ayna sidoo kale ku leeyihiin ganacsiyo xoogan, ayaa waxaa mararka qaar ka dhaco falal amni daro ah oo lagu dhaco hanti badan, iyadoo dowlada Kenyana ay marar badan sheegtay iney wax ka qaban doonto ammaan xumida ka jirto xaafadaas.